Madaxweynyaasha Puntland iyo Kenya oo Maanta Nairobi kulan ku yeeshay – SBC
Madaxweynyaasha Puntland iyo Kenya oo Maanta Nairobi kulan ku yeeshay
Madaxweynayaasha Puntland iyo Kenya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya .
Kulanka dhexmaray labada madaxweyne oo ka dhacay guriga State Hous-ka ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka qeyb galay Raiisul wasaarihii hore Soomaaliya Cumar C/rishiid Sharmaarke iyo Prof, Maxamed Cabdi Gaandi.
Soo dhaweyn ka dib, Madaxweynaha Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxamed maxamuud Faroole ayaa ka warbixiyay Safarkiisa iyo xaaladaha kala duwan ee Dalka iyo horumarka Puntland dhan siyaasad, dhaqaale iyo amaanba.
Madaxweynaha Kenya ayaa isna ka sheekeeyay sida dowladiisa uga qeyb qaadaneyso howlaha ka socda Soomaaliya, isagoona ku amaanay Puntland dowrka ay kaga jirto ka qeyb qaadashada dadaalada lagu doonayo dib isutaaga Soomaaliya.
Arimaha ladagaalanka Alshabaab, Dastuurka Federaaliga iyo Jubaland ayaa ka mid ahaa waxyaabihii kulanka lagu falanqeeyay .
Sikastaba ha ahaatee kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ay labada madaxweyne isugu yimaadaan, waxaanu qeyb ka yahay safarka shaqo ee uu madaxweyne Faroole iyo wafdigiisa ugu sugan yihiin Wadanka deriska ah ee Kenya.